Seattle nePortland ruzha ruzha mazinga anosvika kuNew York City neSan Francisco
Location: musha » Kutumira » Culinary » Seattle nePortland ruzha ruzha mazinga anosvika kuNew York City neSan Francisco
Mhedzisiro yeongororo ichangoburwa yemazinga eruzha muresitorendi Seattle uye Portland zvinoratidza kuti maguta maviri ePacific Northwest ari pedyo nemazinga eruzha New York City uye San Francisco, ine mbiri dzemaresitorendi ane ruzha zvakanyanya munyika yose.
SoundPrint, app yeruzhinji inozivikanwa se "Yelp yeruzha," ine yakavakirwa-mukati decibel mita inobvumira vashandisi kuyera mazinga ekurira uye kuwana maresitorendi nemabhawa akanyarara pasi rese.
Data yechidzidzo ichi, yakavakirwa pazviyero kubva kunzvimbo dzinopfuura zviuru zviviri nemazana matatu, inoratidza kuti paavhareji, maresitorendi eSeattle ane ruzha rwe2,300 dBA, ne77% yenzvimbo dzine ruzha rwakanyanya pakutaura (> 56 dBA) uye 75% pamusoro pe24 dBA, nhanho. izvo zvinogona kuisa mungozi hutano hwekunzwa hwevashandi venzvimbo nevatengi. Portland yakanyoresawo avhareji ye80 dBA, ine 77% ichinyanya ruzha pakutaura uye 65% pamusoro pe27 dBA.
"Vanhu vazhinji havana pfungwa yehutano hwehutano," akadaro Gregory Scott, muvambi weSoundPrint. “Izvi zvinogona kuunza dambudziko paunenge uchiedza kukurukura, uye zvinogona kuva nengozi kuutano hwomunhu. Ruzha rwakanyanya inyaya yakakomba yehutano hweveruzhinji sezvo 40 miriyoni yevakuru vekuAmerica, vangangoita makumi maviri nemana muzana, vangave nekurasikirwa nekunzwa kunokonzerwa neruzha.
New York City Pacific Northwest Seattle
Gurukota rezveKushanya kuti vatore chikamu muChina cheJamaica Yekufamba Musika muLondon
Seychelles Tourism Board yakatungamira Local Trade Partners paRéunion Roadshow
Zvakanaka Zvibereko Mukutanga Kuonekwa kweChiropa Cancer